Electric Skateboards Mety ho Riders Flying - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Rehefa niseho voalohany modely hita ao amin'ny an-tsena, dia efa tokony ho fotsiny ampiasaina ho tompon fitaterana, satria lehibe noho ny rehefa te ho any an-tranon'ny namana iray, ho any amin'ny lise, na hafa commuting. Izany haingana skateboard herinaratradia tonga noho ny kapila aoriana novakiny, goavana pneumatic lalana kodiarana ary Powered by iray Brushless Hub Motor 350W * 2 sy 20pcs18650 High tahan'ny Lithium sela Surf ny vohitra amin'ny iva ity afovoan'ny hery misintona nanaovana! Raha ara-teknika dia ho afaka swap vatoaratra, dia tsy misy mafana swappable setup, mba Te ho sarona ara-bakiteny ny entana mba napetrany tao anatin'ny iray vaovao. Eo amin'ny fahefana, dia tahaka izany amim-pahamarinana dia mety tsara ny totohondriny entana araka izany afaka hanatratra ambony haingana ny 26mph. Tsy mampiasa ny Manta Drive fantatrareo-ny fomba izay tsy mampiasa gearing na fehikibo. Izany dia midika hoe natao ho an'ny fampiasana rehetra endrika terrains, satria fientanam-po faratampony ho mpikatsaka izay mila hahazoana be loatra amin'ny pretentious terrains hafainganam-pandeha.
Amin'ny fomba mandeha manidina haingana sy ny havoana, satria avo be ny very saina ny malefaka ao lehibe maotera rehetra fandresena ny fotoana, na izany aza tianao ny skateboard mba hijery sy traikefa toy ny anankiray toy-pahombiazana. Na izany aza, raha tianao ny herinaratra skateboard izay kely, malemy fanahy, ary fampitahàna vola, ny Roto-tarika (KOOWHEEL marika) herinaratra skateboard no safidy tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Ny Roto-tarika skateboard aterineto tsena manolotra anareo andianà herinaratra hoverboard , anisan'izany ny roa kodia tena mahay mampifandanja scooter ka nofonosiny herinaratra scooter sy ny mafana indrindra kodia efatra longboard herinaratra . Ankehitriny fa efa nahazo anjara rehetra enti-mampiditra ny niala tamin'ny lalana, tiantsika ny hijery tsara ilay avo lenta sy tsara fampisehoana herinaratra skateboards alaina avy teo izy, dia jereo ny vidiny izy ireo mpaninjara amin'ny Roto-tarika tsenambarotra.
Maro amin'ireo vaovao herinaratra hoverboard dia manaiky hozakain'izy ny lavitra, Bluetooth lavitra, izay manampy anao hanafaingana na namaky miaraka amin'ny intuitive thumbwheel, ary izany dia nitarika koa tondro mampiseho anao ny fomba be dia be no mety ho ranom sisa amin'ny herinaratra skateboard. Iray amin'ireo lafin-javatra maro ny isan'ny mahafinaritra indrindra ao amin'ny Roto-tarika ( Koowheel ) dia ny hoe ny fampiharana mamela ny mpitaingina hisolo ny mikirao praogramanao ny birao wirelessly amin'ny fomba Bluetooth. Mazava ho azy, izany no tena hiteny ratsy safidy mba handrefy fampisehoana tsy hoe ny fari-ny birao sy ny safidy ny zana-kazo tsy noheverina.
Post fotoana: Mar-15-2018